ညိမ်းညို: February 2008
When I was young and free and my imagination had no limits, I dreamed of changing the world. As I grew older and wiser, I discovered the world would not change, so I shortened my sights somewhat and dicided to change only my country.
As I grew into my twilight years, in one last desperate atteampt, I settled for changing only family, those closest to me, but alas, they would have none of it.
And now as I lay on my deathbed, I suddenly realize; "If I had only changed my self first", then by example I would have changed my family.
Posted by ညိမ်းညို at 12:563comments Links to this post
Posted by ညိမ်းညို at 19:026comments Links to this post
တစ်ခါတစ်ခါ သိပ်အမြင်ကပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ချစ်စရာမြို့ ကလေးပေါ့
ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်ကလေး နေရှာခဲ့တဲ့ မြို့ ကလေးပေါ့
နည်းပညာငတ်ပြတ် လစ်ဟာနေရတာကိုလည်း မနာကျည်းတတ်
မျက်ရစ်မဲ့ မျက်ခွံမို့အစ် ဖောသွပ်ကြွမောက်သူတွေက ဂုတ်သွေးစုပ်
နည်းနည်းကလေးမှ ထိုးထိုးထောင်ထောင် ခေါင်းဆောင်မှု မပေးနိုင်ရှာဘူး
မိရိုးဖလာ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မြန်မာဆန်တဲ့ မြို့ ကလေးပါ
တစ်မြို့ လုံးကို နဖားကြိုးထိုး
နောက်ဆုံးထွက်သက် အသက်ရှူသံတွေ တဖုန်းဖုန်းနဲ့
လုံးလုံးမွကြေ အနာဂတ်တွေ ဆိတ်သုန်းတော့မှ
အသိဥာဏ်ဆွေးရင် ဘ၀တွေ စတေးရတယ်
" တောက် " တစ်ချက် ပြင်းပြင်းခေါက်ရုံနဲ့
ရာဇ၀င်တွေ ကျွမ်းထိုးမှောက်ခုံ ဖြစ်ခဲ့ဖူးရင်
ငါတို့ ညာသံပေးပြီး " ကျား " တက်ထိုးရမယ်
ငါတို့ အသည်းနှလုံးတွေ ကျွဲပခုန်းထချင်ထ
နင့်ကို ထမ်းတင်ထားမယ် မြို့ ကလေးရေ.. ။
Posted by ညိမ်းညို at 23:03 12 comments Links to this post
မျက်လှည့်ဆရာရဲ့ 'ဘင်' ကိုမှ ၀ယ်မယ်တဲ့...
ခမျာမှာ ဒီဘင်ကလေးနဲ့မှ လူစုရရှာတာကို
ဒီဘင်ကိုမှ ၀ယ်ဖို့ကြိုးစားနေရှာလေရဲ့ .....။
ဒီမြွေလေး ပြ,ပြပြီးစားရတဲ့ တစ်ဖက်သားကိုမှလေ။
သူ့ကို အလျင်သောက်စေခြင်းနဲ့ မြှောက်စားရမယ်တဲ့ ...။
မောင်ချောနွယ်အတုက ပြောတယ် ....။
ဒါပေမဲ့ သူ့ကို ကဗျာဆရာဖြစ်စေခဲ့သမို့
နေ့စဉ် နေ့စဉ် ထိသိနေရသူ
လူ မဟုတ်ဘူးလို့ မပြောလိုက်ကြပါနဲ့။
Posted by ညိမ်းညို at 13:530comments Links to this post
မြို့ ကြီးပြကြီးမှာ လင်းချင်မှလင်းမယ်
လင်းတပပ ၀င်းမြ..သာစွ ။
(သူ့အဖို့ ) အရှိန်ပြင်းကောင်းမှ ပြင်းမယ်
ဘ၀တစ်ခုလုံး လွင့်သွားရှာပေါ့.. ကြေမွ ။
Posted by ညိမ်းညို at 21:523comments Links to this post
မင်းအလိုရှိသလိုသာ ပျံပါ... နားပါ
နေရစ်ခဲ့ကွဲ့ အဝေးဆီမှာ... ....တဲ့
Posted by ညိမ်းညို at 20:112comments Links to this post
ဆပ်ကပ်ထဲမှာ လူတစ်ကိုယ်လုံးပိုင်းပြသွားတဲ့ ပြကွက်လောက်တောင်
စွန်ရဲတစ်ကောင်လို ထိုးသုတ်နိုင်ရမယ်လို့လည်း မဆိုလိုပါဘူး
သဘာဝတရားက စားခွက်တစ်ခုစီ ဖန်ဆင်းပေးထားပြီးသား
ကိုယ်ဟာ အသက်ကြီးလာသလောက် အချိန်စီး,မစီး
မင်းကို လူတွေအမြင်ကတ်ပြီပေါ့ ငနာရဲ့။
Posted by ညိမ်းညို at 13:264comments Links to this post
Posted by ညိမ်းညို at 19:58 8 comments Links to this post
ဘ၀က အကြိမ်ကြိမ်လျှော်ဖွပ်ထားတဲ့ အင်္ကျီတစ်ထည်လို
ငါ ဘယ်တော့မှ လက်ပစ်မကူးဘူး
Posted by ညိမ်းညို at 19:562comments Links to this post
သူတို့ ... ...
"ငါတို့ မနိုင်လို့ရှုံးခဲ့ရပြီ" တဲ့။
- အီကုတ်ဆိုတာ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ အများဆုံး တွေ့ရတတ်တဲ့ ပိုးကောင်လေးတွေပါ။ ဒေသအလိုက် အခေါ်အဝေါ် အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီပိုးကောင်လေးတွေဟာ မြေသားလုံးအတွင်းမှာ ရစ်ခွေနေတတ်ပြီး ဒေသခံတွေက ဆီနဲ့ကြော်စားလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ အသက်ရှင်နေစဉ်ကာလမှာ ကိုယ့်နေရာလေးတွေနဲ့ကိုယ် သီးသီးသန့်သန့်နေတတ်ကြပြီး တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု မရှိသလောက် နည်းပါးကြပါတယ်။ ဆီပူဒယ်အိုးထဲကိုထည့်ပြီး အကြော်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှသာ ပထမဆုံးအကြိမ် မျက်နှာချင်းဆိုင်မိကြတာ လို့တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Posted by ညိမ်းညို at 18:484comments Links to this post
အစောကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့မှာ "ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ရိုးဂုဏ်"ဆိုတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုတင်ဖို့ စိတ်ကူးထားတာပါ။ တော်တော်လေးလည်း ပြင်ပြီးနေပါပြီ။ သို့ပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲ စိတ်မကောင်းစရာ အမြင်လွဲတာမျိုး အကြုံခံလိုက်ရတော့ ရေးလက်စကို ရပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ကို လေးစားအားကျရလွန်းတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေနဲ့ ကျွန်တော်သန်ရာ ရှုထောင့်ကနေ ချဉ်းကပ်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်မိတာပါ။ အဲဒီခေတ် အဲဒီအခါတုန်းက ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ရင်ထဲမှာ အလျှံညီးညီးဖြစ်ပေါ်နေမဲ့ "ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရမယ်"ဆိုတဲ့ တစ်ကြောင်းတည်းသောစိတ်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အမြဲတစေ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ "ရိုးဂုဏ်"ဆိုတဲ့ စိတ်အကြည်ဓာတ်တစ်ခုကို ထုတ်ယူဖော်ပြဖို့ ကြိုးစားကြည့်မိတာပါ။
အရွယ်နဲ့မမျှအောင် ကျယ်ပြန့်လှတဲ့နိုင်ငံရေးတွေးခေါ်မြော်မြင်မှုများကို ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ရှားပါးမိန့်ခွန်းများ နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင်ရေးသားခဲ့တဲ့ ဘားမားချဲလင့် စာအုပ်မှာ တပေါင်းတစည်းထဲ လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ရိုးဂုဏ် ဆိုတဲ့ စိတ်အခြေအနေတစ်ရပ်ကိုတော့ဖြင့် စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲရယ်လို့မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တိုင်း စာအုပ်တိုင်းကို ဖတ်လိုက်မိတိုင်းမှာ ခံစားသိမြင်နိုင်ပါတယ်။ စာရေးသူများက ငါတို့ဗိုလ်ချုပ်ဟာဖြင့် ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ရိုးသားခဲ့တယ် ဆိုပြီး သီးသီးသန့်သန့် ဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့ကြတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ ကြုံသိတွေ့ထိခဲ့ရတဲ့အတိုင်းသာ ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြတာပါ။ သို့သော်လည်းပဲ အဲဒီလိုရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြတဲ့ စာတွေထဲမှာကို(တစ်စုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့် တမင်လုပ်ရေးထားတာမျိုး မဟုတ်ပဲနဲ့)ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ရိုးဂုဏ်ရိုးဒြပ်ဟာ အထင်းသားပေါ်လွင်ထင်ရှားလို့ နေပါတော့တယ်။
ဥပမာဆိုရရင် "အကြည်ရေ ..ပဲပြုတ်နဲ့ နံပြားရရင် စားချင်တယ်" ဆိုတဲ့ စာတိုလေးထဲမှာကို ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ငဲ့ညှာတတ်တဲ့စိတ်၊ အားနာတတ်တဲ့စိတ်၊ ဇီဇာမကြောင်တတ်တဲ့စိတ်၊ ကိန်းကြီးခမ်းကြီးမနိုင်တတ်တဲ့စိတ်တွေကို ခံစားတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ပဲပြုတ်နဲ့နံပြား စားချင်တယ်၊ ရအောင်လုပ်ပေးစမ်းဆိုတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်က ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားအပေါ် တောင်းဆိုလိုက်ပုံလေးက အကြည်ရေ..ပဲပြုတ်နဲ့နံပြားရရင် စားချင်တယ်ကွာတဲ့။ ရရင်တဲ့နော်။ အိမ်သူသက်ထားအပေါ်ကို အပူကပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ အမိန့်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ ရရင် စားချင်လိုက်တာတဲ့၊ မရရင်တော့လည်း နေပါစေ ကိစ္စမရှိပါဘူးကွာ ဆိုတဲ့သဘော..ဘယ်လောက်နူးညံ့လိုက်တဲ့ စိတ်ထားပါလဲ၊ ခေါင်းထဲမှာ ဗမာပြည်လွှတ်လပ်ရေးကလွဲလို့ ဘာမှမရှိတဲ့ လူရိုးလူရိုင်းကြီးရဲ့ လူတစ်ဖက်သားအပေါ်ထားတတ်တဲ့ ငဲ့ညှာတတ်တဲ့စိတ်၊ အားနာတတ်တဲ့စိတ်ကလေးက တအားကိုနူးညံ့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာက အောင်ဆန်းကား ရိုင်း၏၊ ကြမ်း၏၊ သို့သော်ရိုး၏ လို့ ရုပ်ပုံလွှာအဖွဲ့အနွဲ့မှာ ရေးခဲ့တာပဲလေ။
တက္ကသိုလ်နေ၀င်း(ကိုယ်ရံတော်ဗိုလ်ထွန်းလှ)ရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှတ်တရစာအုပ်တွေ၊ သတင်းစာဆရာ ဦးပုကလေးရဲ့ ငါတို့ဗိုလ်ချုပ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ၊ အောင်သန်းရဲ့ အောင်ဆန်း နဲ့ အောင်သန်းရဲ့ အောင်ဆန်းမိသားစု၊ အိုးဝေညိုမြ၊ ဆရာကြီးမောင်ထင်၊ ဆရာကြီးဒဂုန်တာရာတို့ ရေးသားခဲ့ကြတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ပုံလွှာအဖွဲ့အနွဲ့တွေ၊ ဘယ်စာအုပ်ကိုပဲ ဖတ်မိသည်ဖြစ်စေ(ဗိုလ်ချုပ် ဘယ်လိုရိုးသားပါတယ်ဆိုတာကို တမင်ဇောင်းပေးပြီး ရေးထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကို)ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ရိုးဂုဏ်ရိုးဒြပ်ဟာ ကြည်စင်ဝင်းပလို့နေပါတယ်။ သည်လို ချဉ်းကပ်မိတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ကျွမ်းဝင်ရင်းနှီးရာ ဘာသာဗေဒနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ရိုးဂုဏ်ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးကို ပုံဖော်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်မိတာပါ။ ဒါပေမဲ့ဗျာ...ကျွန်တော်တို့ရေးရင်ကိုပဲ.....။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ ဘလော့မှာတင်ဖို့ အဆင်ပြေသည်ဖြစ်စေ၊ မပြေသည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော်ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ရိုးဂုဏ်ကို ဆက်လက်ပုံဖော်နေမိဦးမှာပါပဲ။
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မွေးနေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်ရေးသားခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားဝတ္တရား ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကို ကူးယူဖော်ပြအပ်ပါတယ်။ သည်ဆောင်းပါးကိုရေးစဉ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့အသက်ဟာ ၂၃ နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ၂၃ နှစ်အရွယ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦးရဲ့ ပညာရေးအမြင်ကျယ်ပြန့်မှုကို လေးစားအံ့သြဖွယ် ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာရေးစရာကြီး ရှိတ်စပီးယားက ကမ္ဘာအလုံးစုံသည် ဇာတ်ခုံမျှသာတည်းဟု မိန့်မြွက်ဖူး၏။ ထိုကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံတွင် လူအမျိုးမျိုး၊ အရွယ်အမျိုးမျိုး၊ အတန်းအစားအမျိုးမျိုးတို့သည် ကိုယ့်အခန်းကို ကိုယ်ကိုင်၍ ဇာတ်နိုင်အောင်ခင်းသွားရလေသည်။ သို့ဖြစ်ရာ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ သိကြားတတ်သော အချိန်အရွယ်မှစ၍ သေသည်ထိအောင် မိမိ၏ အလုပ်ဝတ္တရားအဖြစ်ရှိ၏။ ထိုဝတ္တရားကို ကြေပြွန်မှသာလျှင် လောက၌ လူဖြစ်ကျိုးနပ်ပေမည်။ ကမ္ဘာ၏ နောင်ခေတ်အမွေခံဖြစ်ကြသော ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားတို့မှာလည်း အထူးသဖြင့် ၁၆နှစ်၊ ၁၇နှစ်မှ အထက်သို့ရှိသော ကျောင်းသားများမှာလည်း အဆိုပါ ၀တ္တရားဥပဒေမှ မကင်းလွတ်ကြချေ။ ယင်းသို့ဖြစ်လျှင် ကျောင်းသားဝတ္တရားသည် အဘယ်နည်း။
အမြင်ကျယ်ကျယ် ကြည့်လေ့ရှိသောသူတို့သည် ကျောင်းသားဆိုသည်မှာ တန်းစာကျက်၍ စာမေးပွဲအောင်ရုံမျှဟူသော အများအယူအဆ၏ တိမ်ခြင်းအဖြစ်ကို သိရှိကြလေပြီ။ ထိုအယူအဆကား ခေတ်အောက်ကျသည့် အယူမျှသာ ဖြစ်ပေမည်။
ပညာရေးကို ကျွမ်းကျင်သော ကမ္ဘာ့ပညာရှိတို့သည် လောကရေး၊ ဓမ္မရေး ပြဿနာအရပ်ရပ်တို့ကို စီစစ်ဝေဖန်ဖြေရှင်းတတ်သော ပညာရပ်မှ စာအုပ်ပေစာကို အံ၍ရသောအမှတ်သညာ၊ နှစ်ရပ်ကို ခွဲခြား၍ ထားလေသည်။ စာမေးပွဲကို အောင်မြင်သူသည် လောကစစ်ပွဲတွင်လည်း အောင်မြင်နိုင်သည့် အရည်အချင်းရှိသည်ဟု မုချဆတ်ဆတ် မဆိုနိုင်ချေ။ ဤသို့လျှင် စာမေးပွဲ၏ အကြောင်းသနစ်ကို ဖော်ထုတ်လာကြ၏။ An examination of examinations စာမေးပွဲများ၏ အကျိုးအပြစ် စစ်ဆေးချက်ဆိုသော စာအုပ်တွင် ဤအချက်ကို ရှင်းလင်းပြသထားပေ၏။ စာမေးပွဲတစ်ခု၏ အဖြေစာရွက်များကို စာစစ်သူအမျိုးမျိုးအား စစ်ဆေးစေရာ အဖြေတစ်ခုတည်းကိုပင် အမှတ်ပေးပုံခြင်းမတူသည်ကို တွေ့ရပေသည်။ တဖန် စာစစ်သူတစ်ဦးတည်း ၎င်းတစ်နှစ်ခန့်က ဖျက်ခဲ့သောအဖြေကို နောက်ထပ်စစ်ဆေးသည့်အခါ ပထမအမှတ်ပေးပုံနှင့် နောက်တစ်ခါ အမှတ်ပေးပုံခြင်းမှာ ကွာခြားသည်ကို တွေ့ရလေသည်။ ကမ္ဘာကျော်ပြဇာတ်ရေးဆရာ ဘားနတ်ရှောကလည်း တရံသောအခါက အတန်းထဲတွင် ထိပ်ကျသောကျောင်းသားသည် လောကတွင် အောက်ဆုံးထစ်ရောက်တတ်သည်ဟု မိန့်ဆိုဖူး၏။
ဤတွင် ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာကြီး၏ အရေးအသားကို ၎င်းရေးသားသဖြင့် ယုံကြရမည်ဟု မဆိုလို၊ သို့ရာတွင် ၎င်းကား အကြောင်းမဲ့ မရေးသားရာ၊ ယင်းသို့ဖြစ်ရကား ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာ့ရာဇ၀င်တွင် သာဓကအထောက်အထားများကို ကြည့်မည်ဆိုလျှင် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းကျရောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် စာမေးပွဲများတွင် ထိပ်တန်းကျသူချည်း မဟုတ်ပေ။ ဥပမာ အနည်းငယ်ထုတ်ပြရသော် ယခုခေတ် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းသမားများတွင် ဟစ်တလာနှင့် မူဆိုလိုနီတို့သည် ကျောင်းမျှပင် ကောင်းစွာမနေခဲ့ရပေ။ မဟတ္တမဂန္ဒီသည်လည်း ကောလိပ်ကျောင်းတွင် ရောက်ဖူးရုံမျှရှိ၍ ကျောင်းသားအဖြစ်နေစဉ်အခါက ထူးထူးချွန်ချွန်မရှိချေ။ ပန်ဒစ်ဂျဝါဟလာနေရူးသည်လည်း အင်္ဂလန်ပြည်ရှိ နာမည်ကျော်ကျောင်းနှင့် တက္ကသိုလ်တို့မှ အောင်မြင်ခဲ့လင့်ကစား ကျောင်းသားအဖြစ်ဖြင့် များစွာ မထူးချွန်လှ။ ဘီအေဂုဏ်ထူးတန်းတွင် ဒုတိယတန်းမျှသာ ရလေသည်။ သို့ရာတွင် ထိုအခါက ၎င်းအထက်ပထမရခဲ့သော သူတစ်ဦးမှာ ရန်ကုန်တွင် ပါမောက္ခတစ်ဦးအဖြစ်ဖြင့် ၎င်းကဲ့သို့ ကျော်ကြားခြင်းမရှိပေ။ အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီးများဖြစ်ကြသော ဂိုးလ်စမစ်၊ ဆာဝါလတာစကော့ စသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာလည်း ကျောင်းနေစဉ်က ထူုးချွန်ခြင်းမရှိ၊ ဆာဝါလတာစကော့မှာမူ လူ့ငနွားဟုပင် ဆရာ၏အခေါ် ခံရလေသည်။ ဤကား ဥဒါဟရုဏ်ကို အကျဉ်းမျှ သရုပ်ပေါ်အောင် ပြလိုက်ခြင်းပေတည်း။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်း၏ အကြောင်းကိုစစ်လျှင် လူသားတစ်ဦးတစ်ယောက်၏တန်ဖိုးကို မည်မျှရှိသည်ဟုချိန်ဆရန် တထစ်ချသတ်မှတ်ထားသော နည်းမရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။
စင်စစ်သော်ကား ကျောင်းတွင်တစ်ခါမျှမနေဖူး၍ စာတစ်လုံးမျှမသင်ဖူးသူပင် ပညာရှိဖြစ်နိုင်၏။ ဤကား ဖြစ်နိုင်သည့်အကြောင်းကို အလွန်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ယခု ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသည့် စာအုပ်အားလုံးသည် အရင်းစစ်လျှင် လောက၏အကြောင်းကို အမျိုးမျိုး မှတ်ချက်များသာ ဖြစ်ပေသည်။ ထိုမှတ်သားချက်များကို ရေးသူများ၏အာဘော် ၎င်းတို့၏ ရေးရာဒေသ၊ ရေးသည့်အချိန်ကာလ စသည်တို့ကိုကြည့်၍ ဝေဖန်ပြီးလျှင်၊ လောက အလုပ်ဝတ္တရားတွင် သုံးစွဲတတ်မှသာ စာတတ်အမှန်ဖြစ်ပေသည်။ အကယ်၍ စာမတတ်သူသည် လောကအမှတ်အသားကောင်းမွန်၍ နေရာချတတ်ပါလျှင် စာတတ်နေရန်မလိုချေ။ ထို့ကြောင့်ပင် မူဆိုလိုနီက
၎င်း၏အတ္ထုပ္ပတ္တိတွင် ကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့သော အကြီးဆုံးသောစာအုပ်ကား ကျွန်ုပ်နေခဲ့၊ နေဆဲသော လောကကြီးပင်တည်းဟု ရေးထား၏။ ထိုကဲ့သို့ စာအုပ်စာပေမှ ကျော်လွန်သောပညာကို အဘယ်သို့ ရအံ့နည်း။
ထိုပညာစစ်ကိုရရန် လွတ်လပ်စွာ တွေးတောပြောဆို ဆွေးနွေးလုပ်ကိုင်လိုသော စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးရန် လို၏။ ဤအချက်ကို ပညာရေးကျွမ်းကျင်သူ ပုဂ္ဂိုလ်များက Academic Freedom ပညာသင်ကြားရေး လွတ်လပ်ခွင့်ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြ၏။ ဤအချက်ကား ကမ္ဘာ့ရာဇ၀င်ကို တစ်မျိုးတစ်မည်ပြောင်းလွဲစေသည့် ရီနေဆန့်နှင့် ရီဖော်မေးရှင်းခေါ် ခေတ်သစ်ဝါဒ၊ လောကဓာတ်ပညာပြန့်ပွားရာ အကြောင်းအရပ်တည်း။ ဤအချက်ကား ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂေါတမဘုရားသခင် ဟောကြားသော ကာလာမသုတ္တန် သဘောအရပင်တည်း။
ထိုလွတ်လပ်စွာတွေးတောပြောဆို ဆွေးနွေးလုပ်ကိုင်လိုသော စိတ်ရှိရမည်ဆိုသည်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိထင်ရာ တွေးတောပြောဆို လုပ်ကိုင်ခြင်း မဟုတ်ပေ။ လောကရှိလူအပေါင်းတို့သည် ရေတွင်းထဲရှိ ဖားသူငယ်ကဲ့သို့ နေ၍မဖြစ်ပေ။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကူးလူးဆက်ဆံရလေသည်။ ယခုခေတ်အခါတွင် ဤသို့ကူးလူးဆက်ဆံခြင်းမှာ ပိုမို၍ နယ်ကျယ်လာလေသည်။ ယခု အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည် ကြုံတွေ့နေရသော ရှားပါးရေးခေတ်သည် ထိုဥပဒေကို လွန်ဆန်၍ ကိုယ့်ဘက်ကိုယ့်သဘောကိုမြင်သော၊ ၀ါဒကြောင့်ဖြစ်သော ကမ္ဘာစစ်ကြီး၏ ပဲ့တင်သံဖြစ်လေသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရာ လူတိုင်းလူတိုင်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပေါင်းအသင်းသမဂ္ဂရှိမှသာ အမျိုးမျိုးသော အယူအဆအမှတ်အသားတို့ကို တွေ့မြင်သိရှိရ၍ ပိုမိုအမြင်ကျယ်လာနိုင်လေသည်။ သို့အမြင်ကျယ်မှ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အနာခံတတ်ခြင်း၊ စောင်မကူညီတတ်ခြင်း၊ အပြောအဆိုအနေအထိုင် ပြုပြင်လာခြင်း စသည်ဖြင့် လောက လူလုပ်တတ်သည့် အရည်အချင်းများ ရရှိနိုင်လေသည်။
ထို့ကြောင့် ထိုသို့ကူးလူးဆက်ဆံအမြင်သန်အောင် ကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များတွင် ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစားထားခြင်း၊ အသင်းအပင်းများထောင်ခြင်း စသည်တို့ ပြုကြရလေသည်။ သို့ရာတွင် အပေါင်းအသင်း သမဂ္ဂအတွက် ပြုလုပ်ရာတွင် လွတ်လပ်စွာ မပြောရမဆိုရ မလုပ်ရမဆွေးနွေးရလျှင် မျက်စိပိတ်ထားသည်နှင့် တူပြန်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ နှစ်ဘက်၊ နှစ်ချက်စုံမှ ပညာရေးအစစ်မည်လေသည်။
တဖန် ယနေ့ဖြစ်နေသော ကျောင်းသားများသည် နက်ဖြန် ပြည်ကြီးသားများ ဖြစ်ကြ၏ဟု ဆိုရိုးစကားရှိ၏။ သို့ဖြစ်ရာ ပြည်ကြီးသားတို့၏ အင်္ဂါလက္ခဏာနှင့်ညီအောင် အုပ်ချုပ်နည်း၊ မိမိအခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ခိုက်နည်း၊ စကားပြောနည်း၊ စည်းကမ်းသေ၀ပ်နည်း၊ ကိုယ်လက်ကျန်းမာရေးစသည်ဖြင့် နည်းမျိုးစုံအောင် အသင်းအပင်းများ၊ ရဲတပ်များ၊ ကစားနည်းများကို ထွင်ကြရ၏။ ထိုမျှမက ယခုအခါ တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံမှာ ခွဲစပ်၍ မဖြစ်နိုင်။
တရုတ်ပြည်၊ စပိန်ပြည်၊ ပါလက်စတိုင်းပြည်တွင် အဖြစ်အပျက်များသည် ဤတိုင်းပြည်ကို၎င်း၊ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးခြင်းကို၎င်း၊ လူသတ္တ၀ါတို့အား၎င်း မည်သို့မည်ပုံ ထိခိုက်မည်ဟု သိနိုင်အောင် ကမ္ဘာ့အခြေကိုလည်း မိမိရရသိနိုင်ရန်လို၏။ ဤသည်တို့ကား အကြမ်းမျှ ကျောင်းသားတို့လုပ်ရမည့် ၀တ္တရားများဖြစ်ကြ၏။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာရှိ ကျောင်းသားအပေါင်းတို့သည် လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်၍ စစ်မက်တားဆီးရေး၊ အလုပ်လက်မဲ့ ပပျောက်ရေး အကြောင်းစနစ်ကို ရှာဖွေနေကြ၏။ အခြေအထူးမလှသော စပိန်ပြည်နှင့် တရုတ်ပြည်တို့တွင် ကျောင်းသားတို့မှာ ကိုယ်ထိလက်ရောက် တိုက်ခိုက်နေကြရ၏။ ထို့ကြောင့် အချိန်အခါအလျောက်လည်း ကျောင်းသား၏၀တ္တရားလည်း ကွဲလာ၏။
ဤပြဆိုပြီးခဲ့သော ကျောင်းသားဝတ္တရားအားလုံးကို သိမြင်သည်နှင့်အညီ နောင်ခေတ်ဗမာပြည်ကို ဖန်တီးမည့်ကျောင်းသားများသည် ယခုလူများကဲ့သို့ မညီမညွှတ် မလုပ်တတ်၊ မကိုင်တတ်၊ မဖြစ်ရအောင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂအသင်းကြီးကို အထင်အရှား တည်ထောင်ထား၏။ ထိုအသင်းကို ၀င်ရောက်အားပေးရန်မှာ ကျောင်းသားတိုင်း တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ရှိသူတိုင်းတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားပင်တည်း။
မန္တလေးသူရိယ (အမျိုးသားနေ့ အထူးစာစောင်)
၁၂၉၉ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁၀ ရက်၊ စာ ၁၇-၁၈
Posted by ညိမ်းညို at 23:272comments Links to this post
ဖန်တီးမှုမဲ့ခြင်းသည် အဆိုးရွားဆုံး အန္တရာယ်ဖြစ်၏။ ဖန်တီးမှုမဲ့သူသည် စကားအများကြီး ပြောတတ်၏။ ပေါက်ပေါက်ဖောက်သလိုပင်။ သို့သော် မိမိပြောဆိုသောစကား၏ အလေးအပေါ့၊ အတိမ်အနက်ကိုမူ ချင့်ချိန်နိုင်ခြင်းငှာ မစွမ်းပေ။ ဖန်တီးမှုလက်ဝယ်ရှိသူ သို့တည်းမဟုတ် ဖန်တီးရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေသူသည် စကားအများကြီး မပြောတတ်ချေ။ ဖန်တီးရန်စိုက်ထုတ်ရသော စွမ်းရည်နှင့် လုံ့လ၀ါယမကို အသိအမှတ်ပြု နားလည်လက်ခံသောကြောင့်ပင်။ ထိုသူတို့သည် ဗဟိုနာရီစင်ကြီးနှင့် တူ၏။ မိမိအသံကို လိုအပ်မှ မချိန်ကျရောက်မှသာ အချက်ကျကျ လေးလေးမှန်မှန် ပီပီသသကြီး ပြုတတ်၏။
ပညာရပ်နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ရေပေါ်ရှပ်ပြေးလုပ်ရံမူ မခက်လှ။ တတ်ယောင်၊ သိယောင်၊ ဟုတ်ယောင် ထင်မြင်ရန်အတွက် ထောက်ပံ့ကျားကန်ပေးထားသည်ဟု ယူဆနိုင်သော အချက်အလက်များကို အလိုက်သင့် ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်သောကြောင့်ပင်။ မိမိတရားသေဆုပ်ကိုင်ထားသော ယုံကြည်မှု၊ မိမိသက်ဝင်နေသော လမ်းကြောင်းနှင့် သွေဖည်စေသော အပိုင်းတို့ကို ပယ်နှုတ်ထိန်ချန်၊ ဒွိဟဖြစ်စေသော ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မှုတို့ကို ဖုံးဖိကွယ်ဝှက်..၊ ထိုသို့ဖြင့် လူတို့သည် ကိုယ်တိုင်ထူထောင်သောဝါဒ၌ သက်ဝင်ယုံကြည်မှုအရှိဆုံး ဖြစ်လာကြ၏။ ကာကွယ်ရာ၌လည်း ဇောအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာကြ၏။ ထိုသူတို့သည် စိတ်ကိုဖွင့်ထားရမည်ဟု အမြဲတစေ ဆိုတတ်ကြကုန်၏။ အမှန်အားဖြင့် ထိုသူတို့သည် စိတ်ကိုဖွင့်ထားကြခြင်းမဟုတ်။ မျက်စိကို ဖွင့်ထားကြရုံမျှသာ။ မျက်စိကိုဖွင့်ထားသဖြင့် အမြင်ကျယ်ကောင်းကျယ်မည်။ အသိဥာဏ်ကျယ်ပြန့်ရန်မူ မလုံလောက်သေး။ အမြင်ကျယ်ခြင်းနှင့် အသိဥာဏ်ကျယ်ခြင်းသည် ကွာခြားလှချေ၏။
ပမာဆိုရသော်... ၊ အတန်အသင့် မှတ်ဥာဏ်ကောင်းသောလူတစ်ယောက်သည် ဘူမိဗေဒဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပြဌာန်းစာအုပ် သုံးအုပ်ခန့်နှင့် ဘူမိဗေဒပညာရှင်ကြီးများ ပြုစုသော ကျော်ကြားသည့် စာအုပ်သုံးအုပ်ခန့်ကို လအနည်းငယ်အတွင်း နှုတ်တိုက်အာဂုံဆောင်နိုင်သည်ဆိုအံ့။ ထိုသူသည် နေ့ချင်းညချင်း ဘူမိဗေဒပညာရှင်ကြီးဖြစ်လာမည်လော။ ပညာ၏သဘောမှာ ပြင်ပဗဟိန္ဓအကြောင်းနှင့် မလုံလောက်ပေ။ မိမိ၏ အတွင်းအဇ္ဇျတ္တမှလာသော စိတ်၏သဘောနှင့်လည်း များစွာသက်ဆိုင်ပေ၏။ ထိုပညာရပ်အပေါ် မြတ်နိုးခုံမင်နှစ်ခြိုက်လှသော အတွယ်စိတ်ကလေးနှင့် မြင့်သည်ထက်မြင့်အောင် မြှင့်တင် ကြံဆောင်ပေးလိုသော ဘာမထီစိတ်တို့သည်လည်း ရှင်သန်ခိုင်မြဲနေအပ်ပေသည်။
လူတို့သည် ယောင်ခြင်းအမှု၌ နေသားကျနေပြီဖြစ်သဖြင့် နေရာကဏ္ဍအသီးသီး၌ ယောင်တတ်ကြကုန်၏။ ဆိုင်းသံဗုံသံ တထီထီနှင့် တက်ကြွစွာဟန်ရေးပြနေသော လက်ဝှေ့သမားကိုမြင်သော် ခဏချင်း၌ပင် မိမိသည်လည်း လက်ဝှေ့ကျော်ကြီးတစ်ဦး ဖြစ်လိုက်ချင်၏။ လက်ဝှေ့ပညာဟူသည် ဤရွေ့ဤမျှလောက်ကြီးတော့ ခက်ဟန်မတူ၊ ငါလိုက်စားလျှင် အလွယ်နှင့်ရပေမှာပဲ ဟုလည်း တွေးထင်တတ်ကြကုန်၏။ လူအများကြည်ညိုလေးစားသော စာရေးဆရာကြီးကို မြင်သည်ရှိသော် ခဏချင်း၌ပင် မိမိသည်လည်း စာရေးဆရာတစ်ဦး ဖြစ်လိုက်ချင်ပြန်၏။ ထိုစာရေးဆရာကြီး၏ လတ်တလောအနေအထားကိုသာ ကွက်၍အားကျခြင်းလည်း ဖြစ်ဟန်တူ၏။ နောက်ကွယ်မှ ရုန်းကန်လာခဲ့ရသော ကာလတာကိုမူ အလေးထားထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အလိုမရှိကြပေ။ စင်မြင့်ပေါ်မှ အပြောအဟောကောင်းသူကို တွေ့ရပြန်သော် ထိုဆန္ဒသည် ခဏချင်း၌ပင် ရုန်းကန်တိုးထွက် လာတတ်ပြန်သည်။ "ဒီလို နာရီဝက်၊ တစ်နာရီလောက်ဖြင့် ငါလည်း ပြောနိုင်ပေမှာပဲ" ဟု အထင်ရောက်တတ်ကြ၏။ ထိုနာရီဝက်တစ်နာရီကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ပြောဆိုဟောပြောနိုင်ရန်အတွက် နေ့ပေါင်းရက်ပေါင်း နာရီပေါင်းများစွာ ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ခဲ့ရသော ထိုသူ၏ အားထုတ်မှုကိုမူ မေ့ထားတတ်ကြ၏။ ဤသို့ဖြင့် နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် လူယောင်တို့သည် များစွာ ထွန်းကားပေါက်ဖွား၍ လာကြပေသည်။
အကြောင်းကိုသိခြင်းနှင့် အကျိုးကိုဆောင်ကြဉ်းပေးခြင်းသည် တူမယောင်နှင့် ကွဲပြား၏။ လူယောင်များသည် အကြောင်းကို သိကောင်းသိမည်၊ အကျိုးကိုမူ ဘယ်သောအခါမျှ ဆောင်ကြဉ်းပေးလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ ပမာအားဖြင့် ထမင်းဆာနေသောလူတစ်ယောက်ကို ထမင်းကျွေးလိုက်မှသာ အလုပ်ပြီးမြောက်ခြင်း မည်ပေသည်။ သို့မှသာ ကာယကံရှင်လည်းဗိုက်ဝ၍ အာသာပြေပေလိမ့်မည်။ ထိုသို့မဟုတ်မူဘဲ "စပါးဆိုတာ ဘယ်လိုစပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာကွ၊ အဲဒီဆန်စပါးလေးကို ဘယ်ရာသီမှာဖြင့် ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ စိုက်ပျိုးပြီးသကာလ၊ ကြိတ်စက်ကြီးတွေနဲ့ ဘယ်နည်းဘယ်ဟန်ကြိတ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါ ဆန်ဖြူဖြူလေးတွေ ရလာတာပေါ့ကွာ၊ ဒါကိုမှ ဤသို့ဤနှယ်ချက်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါ ထမင်းဆိုပြီးရပေသတဲ့ကွ" ဆိုပြီး ထမင်းဖြစ်ပေါ်လာပုံဋီကာကို အကျယ်ဖွင့်ရှင်းပြနေရုံဖြင့် ထမင်းငတ်နေသောလူသည် ဆန္ဒပြည့်ဝမည် မဟုတ်ပေ။ ဤကား အကြောင်းကို သိခြင်းသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ အမှန်မူ ထမင်းရအောင်ကြံစည်အားထုတ်၍ အကျိုးကို ဆောင်ကြဉ်းပေးသင့်ပေသည်။ လူတို့သည် ယောင်တတ်သောပင်ကိုယ်သဘာဝရှိရကား နှုတ်တိုက်ရွရွ အာဂုံဆောင်ကျက်မှတ်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး စသည်ဖြင့် ကိစ္စတိုင်း၏အကြောင်းကိုမူ ရှုထောင့်အသီးသီးမှနေ၍ လူတိုင်းလောက်နီးပါး ချပြခင်းကျင်းနိုင်ကြလေသည်။ အမှန်တကယ် အကျိုးကို ဆောင်ကြဉ်းပေးရန်၌မူ ရှေ့မတိုးသာ နောက်မဆုတ်သာဖြင့် ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်လုပ်ကာ အီလည်လည်ကြီးတွေ ဖြစ်နေတတ်ကြကုန်၏တကား။
အချုပ်ဆိုရသော် ယောင်ခြင်းမှာ လွယ်၏။ လူတိုင်းလုပ်နိုင်သည်။ ယောင်ခြင်းအဆင့်မှတက်ရန်မူကား လူတိုင်းမလုပ်နိုင်၊ ခက်လှချေ၏တကား။ (လောလောဆယ်ဆယ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ယောင်ခြောက်ဆယ်တစ်ဦးမျှသာ... :P )
အစအဆုံး ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် မေ့ပစ်လိုက်လို့ ရပါပြီ။ ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း အတွေးအခေါ်လိုလို အတွေးအချော်လိုလို စာမျိုးရေးကြည့်ဖို့ စိတ်ကယောင်လာလို့ လိုက်ယောင်ကြည့်လိုက်တာ... :D
Posted by ညိမ်းညို at 14:584comments Links to this post
Posted by ညိမ်းညို at 12:220comments Links to this post
Posted by ညိမ်းညို at 01:236comments Links to this post
လာ လာ မစွက်ဖက်နဲ့
ကိုယ့်မှာ မေးရိုးရှိရတယ် တဲ့
ခုတော့ မင်းမှာ မေးရိုးမရှိဘဲ
ငါ့အပေါ် လာ လာ သက်ရောက်နေတာ
လေး ငါး ခြောက်ခု မလိုပါဘူး
ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ကျကျနန စီရင်ချက်ချ
ဖော်ဝေး ဆိုတဲ့ ကဗျာဆရာဟာ
Posted by ညိမ်းညို at 01:00 1 comments Links to this post
ဘယ်သူပြောလဲ … ကဗျာဆိုတာ မိုးကျရွှေကိုယ် … …
မရဏလက်တို့ရဲ့ အနုပညာပြကွက်ဖြစ်တယ် … …
… လာ … … လှမ်းစို့ … …
ကဗျာရဲ့ ရင်ခတ်သံဟာ ခံစားချက်ရဲ့ မျဉ်းပြိုင်
အလင်းပြိုင်ကျရင် တို့ပိုင်တဲ့ ဆုံချက်တိုင်း
ကမ္ဘာတစ်သက် ၀င်းလက်တောက်ပနေရမယ်ဆိုတာ … ယုံ … …
ကဗျာဟာ သက်မဲ့ ဒြပ်မဲ့ ဗီတာမင်အပြည့်နဲ့ ခြံထွက်သီးနှံများဖြစ်ရဲ့ …
စိမ်းစိုသန်မာလာခြင်းလည်း ဖြစ်ရဲ့ … …
တစ်ကျွန်းစံ ရာဇ၀တ်ကောင်လည်း ဖြစ်ရဲ့ … …
အလွမ်းတွေဝေလို့ အနမ်းတွေ သွေရတဲ့အထဲ
ကိုယ့်ရင်ငွေ့ကိုယ် ပါးပါးလေးလှုံချင်နေတဲ့ကောင်တွေပါ …
ကဗျာဆရာတွေရဲ့ ၀ိဥာဉ်တွေကို ချခင်းထားတယ် …
လိုက်ဖမ်းလိုက်ကြပေါ့ … …
ငါတို့ဓါတ်ပြုလိုက်ကြတယ် … …
… “ မိုးကျရွှေကိုယ် ” … …
( တည်ညိမ်းကို + ChIroN + တင့်ထူးရွှေ + ဖြိုးငယ် + မျှားပြာ + ညိမ်းညို )
Posted by ညိမ်းညို at 23:500comments Links to this post
သူငယ်ချင်းငါးယောက်ရဲ့ မေးရိုးကို လက်သီးနဲ့ထိုးချလိုက်တယ်
Posted by ညိမ်းညို at 21:424comments Links to this post
အိမ်ငေးသူ ငါ ၀င်ရောက်သွား
ငါ့ဇနီး ငါ့အပေါ်အပြစ်ဖို့သံ ငါကြားမြင်ရ
ငါ မျက်စိစူးပေမဲ့ ငါချစ်ခဲ့မိပေါ့
ငါ့ အိုမင်းရုပ်မျက်နှာကို ငါပွတ်သပ်မိ
"ဟေ့ ဘယ်သူက အိမ်ငေးနေတာတဲ့တုန်း"
"ဟေ့ ဘယ်သူ အိမ်ငေးနေတာတဲ့တုန်း"
လောလောဆယ် လူအိုရုပ်ပေါက် ငါ့မျက်နှာလား
ငါ့ပူဆွေးမှုက ငါ့ကို ပြန်ကြည့်နေတာလား
ငါ အိမ်ငေးရင်း ဝေး ဝေး လာ
ငါ အိမ်ငေးရင်း ဆွေးမြေ့ကွဲအက်လာ။
တွားသွားသူ သစ်သားဘတ်စ်ကားပေါ် တက်လိုက်တယ်
ငါ့ကို အိမ်ငေးသူလို့ မသိကြပေမဲ့
Posted by ညိမ်းညို at 14:450comments Links to this post
ဒီနေ့ ဒိုင်ယာလော့တွေ လွှတ်ကောင်းနေတယ်
ပြီးတော့ heater ပေါ်တင်တယ်
ဟေး..ဟေး မျက်နှာကြီးရှုံ့ မဲ့သွားပုံက
ဟာ..ဟ မင်းကိုငါမယုံတော့ဘူး နှင်းဆီခိုင်
လာလာ မင်းထိုင်လှည့် ငါညောင်းနေပြီ။
ကဲ ... လေကြီးမိုးကြီးရေ
နေဦး ဒါလေးတော့ ကုန်အောင်မော့မယ်ကွာ
ဟ .. ခုံပေါ်မှ မရောက်သေးဘူး
မင်းကို ကြိုသတိပေးမယ် ..
ငါ ခေါက်ဆွဲခြောက်နဲ့ ရန်ဖြစ်ထားတယ်
အရက်မရှိတဲ့ ပုလင်း ဂျိုကာမပါတဲ့ ဖဲထုပ်
ကပ်ကပ်လန်အောင်ရန်မတွေ့ တတ်တဲ့ ကောင်မလေး
အဲဒီစကားလုံးတွေက ကြားရတာများလို့ နားခါးနေပြီ
လျှာဖျားမှာ အသားမာတွေက သက်သေ။
"မင်းတို့အကြိုက် တံဆိပ်မကပ်နဲ့" တဲ့
မင်းရင်ထဲရှိတာ ရေးချလိုက်စမ်းပါ ...
ဘယ်သူမှ ဦးမညွှတ်ရင်နေ ငါဦးညွှတ်မယ်။
မင်းရယ်နေမလား လျှာပေါ် မြက်ပေါက်
ဒါမှမဟုတ် ခပ်တည်တည်နဲ့ မင်းစတိုင်လ်အတိုင်းလုပ်နေမလား
နေဦး "တူတူတူ တူတူတူ" တဲ့
မင်း စင်ပေါ်ကို တက်လိုက်ဦး ...။
မင်းတို့တွေလဲ ဂေါ်ဖီစားပြီး တော်ကီ ပွားလွန်းအားကြီးတယ်
ဖြေးဖြေးလဲ ဖေါက်ပါ ဆြာတို့ရယ်
ကဗျာရေးရင် အတွေးတွေက အခိုးအငွေ့လို
ငါ့မှာလဲ ငိုခြင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ ညွှတ်ကွင်းထဲ
ကံကြမ္မာကလဲ ငါ့ကျမှ မျက်နှာဖျက်ရိုက်
လျှာပေါ်မြက်ပေါက်တောင် ငါဆိုတဲ့ကောင်က ခပ်ပြုံးပြုံးပဲ
ကင်မရာ မီးတွေဖျတ်ဖျတ် ဘယ်သူများ အကယ်ဒမီရမလဲ
ငါ့အနားဘယ်သူမှ လာမကပ်နဲ့ လာမကပ်နဲ့
ခေါင်းထဲက မိုက်ကနဲ ဆို လက်က ရိုက်ပြီးသားပဲ
ဘေးက ဘီယာပုလင်းကလဲ ဖင်ကပ်နေပြီ
ကြားဖူးရဲ့ မဟုတ်လား ။
ဘ၀ကိုကဗျာနဲ့ ဆ,တူရောစပ်ထားခြင်း ဖြစ်တယ်
သံဂဟေ ကြေးဂဟေ အထပ်ထပ်နဲ့
ကိုယ့်ရင်ဘတ်ကိုယ် ပလပ်ခေါင်းထိုးလိုက်ကြတာလည်း ဖြစ်တယ်
မိတ်ဆွေ အလိုက်အထိုက်တော့ မလုပ်ပါနဲ့
ဆဲပါ.. ဆိုပါ.. ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပါ
ဟောဒီကဗျာကပေးလာမဲ့အမွေ ရွှေဖြစ်ပါစေတော့..။ ။
တင့်ထူးရွှေ+ မျှားပြာ+ ညိမ်းညို
Posted by ညိမ်းညို at 03:125comments Links to this post
အသံတွေတောင် ငုတ်နေခဲ့ပါပြီ အမေ။
အကြင်နာအမဲ့ဆုံး ဆုလာဘ်ကို သားရခဲ့ပါတယ်။
ပန်းတွေ အရမ်းပွင့်တာပဲ အမေရယ်။
Posted by ညိမ်းညို at 15:162comments Links to this post
ဒီနေ့လေးဟာ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ နွေးတွေးဖြူစင်တဲ့ ခင်မင်မှုသံယောဇဉ်တစ်ခုတည်းနဲ့တင် အရာရာပြီးပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ မွေးနေ့ပွဲလေးကို သိုက်သိုက်မြိုက်မြိုက်ဖြစ်သွားအောင် ဖွယ်ဖွယ်ရာရာကျင်းပပေးတဲ့ ညီလေးမောင်မျိုး၊ လန်ဒန်လုပ် ကိတ်မုန့်အစစ်ကြီးနဲ့ဧည့်ခံပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းမွန် တို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းများ၊ ညီအကိုမောင်နှမများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေ။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ကြပါစေဗျာ :) :) :)
(၂၃) ခုမြောက် ဘူတာရုံထဲကို
မင်းလွင်ပြင် မင်းလယ်တော မင်းပင်လယ် မင်းလှေငယ်
ကော်ဖီ အေးတဲ့အထိ ငါစိတ်ဝင်စားတယ် ။
လူနဲ့ လူချင်း စကားလုံးပေါင်းပြတတ်တယ်
ငါမင်းကို ဆရာသူငယ်ချင်းလို့ ခေါ်ချင်တယ်
တိမ်ညိုတွေ ကောင်းကင်မှာ ချိတ်ဆွဲတဲ့အချိန်
ရောက်တတ်ရာရာ စာလုံးပေါင်းကြရအောင်ပါ သူငယ်ချင်း ။ ။
ရိုးရိုးလေးပဲ စလိုက်မယ် ကဗျာဆရာ
မြင့်မြတ်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေကို ချပြပါ
မင်းရင်ဘတ်ထဲက သစ္စာတရားဟာ ခန့်ထည်ပါတယ်
သံသရာမှာ ကဗျာဆရာတွေ ဘယ်လိုကျင့်ကြံတယ်ဆိုတာ
ကဗျာဆရာတွေရဲ့ ရူးသွပ်မှုဟာ အနူးညံ့ဆုံး
ပျိုးနုတ်ပါ ရေလောင်းပါ ပေါင်းသင်ပါ
ဒီနေ့မှာ ငါဆုတောင်းပေးတယ် သူငယ်ချင်းရေ..။
အချိန်မှီရောက်အောင်လာပြီး မွေးနေ့လက်ဆောင် ကဗျာတစ်ပုဒ်စီရေးပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းကြီးနှစ်ယောက် ကျန်းခန့်သာလို့ မာပါစေဗျာ :)
Posted by ညိမ်းညို at 11:186comments Links to this post
အဲဒီ ဗိုင်းရပ်(စ်) ပိုးကို
မင်းကို ငါ ရှာဖွေလိုက်ချင်တယ်
ငါ့ ဒိုင်ယာရီ ရဲ့စာတစ်မျက်နှာ
အိပ်မက် တွေနဲ့ ကဗျာဆရာ
ငါ့ကိုငါ ခေါ်ဖို့ မရဲပေမယ့်
ခံစားမှု တွေကိုသာငါတို့ လှုပ်နှိုးတယ်
ကဗျာနဲ့ သရဏဂုံ တင်ရတယ်“…..မောင်ချောနွယ်
ငါ သေရင် သရဏဂုံတင်ဖို့
ကဗျာတွေ ထမ်းပြီး ပြန်ခဲ့တော့..ညိမ်းညို ။ ။
ညီသူငယ်ချင်း မျှားပြာ နှင့် ညိမ်းညို သို့ 
ညိုထက်ညို ( ၂၃၊၀၁၊၀၈ )
Posted by ညိမ်းညို at 15:413comments Links to this post